၆ လအကြာ ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အလှူလေး အောင်မြင်သွားလို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ မိုးစက်ဝိုင် | Duwun
ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇံမြို့က ကျောင်းလေးအတွက်။
မိုးစက်ဝိုင်က ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇံမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာနှလုံးသားကျောင်းလေးအတွက် ၂၀၁၈ခုနှစ်ကတည်းက ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ အလှူလေး ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ပရဟိတပိုင်ရှင်မလေး မိုးစက်ဝိုင်က ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇံမြို့မှာရှိတဲ့ မီးအခက်အဲ၊ ရေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းလေးအတွက် အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအလှူ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း တစ်နှစ်အကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
‘’ချင်းပြည်နယ်အတွက် မနှစ်က သွားလေ့လာပြီးလှူခဲ့ တာ ခုမှပဲပြီးတော့တယ်။ လူတစ်ယောက်များစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးကအဓိကပါပဲ။ နေ့စဉ်သောက်သုံးနေတဲ့ ရေကမသန့်ရှင်းရင် ရေရှည်ကျန်းမာနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးနဲ့ အတူ မိုးစက်တို့ မြန်မာနှလုံးသား စာသင်ကျောင်းမှာ သောက်ရေသန့်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာပါတယ်’’ ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၅၀ က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မိုးစက်ဝိုင်ဟာ မြန်မာနှလုံးသားစာသင်ကျောင်းမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတွေ ရှိပေမယ့် လျှပ်စစ်မီး မရှိတာကြောင့် လျှပ်စစ်မီး လှူခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
‘’တကယ်လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ နေရာများစွာထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တွန်းဇံမြို့ အထက်တန်းစာသင်ကျောင်းမှာ ကလေးတွေ သောက်ရေသန့် သောက်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာပါ။ ဟိုရောက်တော့ စာသင်ကျောင်းမှာ ဂျပန်တွေလှူခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေရှိပေမဲ့ မီးမရလို့ မသုံးရဘူးဆိုတော့ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ စာသင်နိုင်ဖို့ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာသုံးနိုင်ဖို့ရေမီး အစုံလှူဖို့ဖြစ်လာပါတယ်’’လို့ သူကပြောပါတယ်။
မြန်မာနှလုံးသား စာသင်ကျောင်းအတွက် လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ရေ ရရှိဖို့အတွက်ကိုလည်း မြေအနေအထားနဲ့ ဓာတ်တိုင်တွေ စိုက်ထူရဖို့အရေး ၆ လအကြာ ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’အလှူငွေပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နည်းပညာနဲ့ စနစ်တခုလုံးကို swelect company နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်း လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ ရေသန့်နဲ့ လျှပ်စစ်ရဖို့ဦးစွာ survey တွေဆင်းရပါတယ်။ မြေကြီးကထုံးဓာတ်တိုင်တာတွေရော၊ လေ၊ နေ တွက်တာတွေရောပေါ့လေ။ ခုတော့ ၆ လ အကြာမှာ ရေမီးရသွားတဲ့ အတွက် ဒီအလှူလေးကို မြန်မာ့နှလုံးသားအသင်းရဲ့ အလှူရှင်များအားလုံး ပီတိ ဝမ်းသာနိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ခိုက်ခိုက်တုန်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာ လိုက်ပြီး survey ဆင်းပေးတဲ့ မြန်မာ့နှလုံးသားအသင်း ရဲ့စိုင်မင်းထက် နဲ့swelect ရဲ့ engineer ကြီးတို့ကတော့ ဒီအလှူရဲ့ အဓိက Heroes တွေပါပဲ . ... thank you guys . မိုးစက်ဝိုင်’’ ဆိုပြီးတော့ ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။